I-calendula okanye i-marigolds ngummangaliso
Ihlabathi lihlelwe ngokukhawuleza nangobulumko. Ngoko, ngokwemvelo akukho nto iyingozi okanye ayinalutho. Kodwa ezinye izityalo ziyaqhubeka zimangalisa kwaye ziyamxela abantu ngeenkulungwane ezininzi ngokulandelana. Ezi ziquka i-calendula okanye i-marigolds - ummangaliso.
Inkohliso enkulu . I-Cute, efana ne-orange camomile marigold isele iqhelekile ngokuba inegama ezimbini ezisemthethweni - i-calendula, kunye ne-marigolds yonyango. Apho isiteyiti sesibili esichazayo esivela kuso ayifumaneki. Ezinye izigulana ezikhanyayo zikhumbuza umntu onobumba obomvu obomvu kwizikhonkwane zobuhle belizwe, okanye imbewu yesityalo yayibukeka njengeengqungquthela zemigqomo yekati. Kodwa ke iphila phantsi kwamagama amabini.
Iimpawu zonyango zemimangaliso ye- marigold okanye ye-marigold yezilwanyana zonyango ziyaziwa ixesha elide. Kodwa yaba ngumbulelo odumileyo kwi ... abatshabalalisa, abathengisa iziqholo. Inyaniso kukuba iingcongolo zalo zincinci zifana noluhlobo lwemibala ye-crocus ye-crocus. Yaye ekubeni i-safari yayithengiswa (kwaye akusiyo isimboli) ngokulinganiswa kwegolide, abahwebi bezoshishino baqala ukufaka indawo yefronta nge-calendula okanye i-marigolds. Kwakunokwenzeka ukufumanisa ubuqhetseba ngokuphonsa "imicu" embalwa yeentsipho emanzini. Idayi enqabileyo yamanzi yerafron yanikezela ngokukhawuleza okuqulethwe yi-jug umbala we-orange. Amanzi, awa phantsi kwe-marigold okanye e-marigold yezobisi, akazange atshintshe umbala. Ngendlela, abathandi kunye nezixhobo ezinqabileyo ezinoncedo ukukwazi ukuba ngexesha lethu, "i-safari" ngokwenene ihlala ibe yi-calendula. Kodwa i-fatty and milk sauces, i-pilaf ne-roast ifana nayo efanayo-i-calendula (i-color color of marigolds) iququzelele ngokupheleleyo kumafutha. Ngaphandle kwempembelelo ye "plebeian", i-taste of dish-saffron yathinteka kakhulu. Kwaye, yintoni eyona nto ithetha umdla, ukuba inhlalakahle yabantu abaye bafumana le sahani. Kukho nokuba uluvo lokuba inxalenye yezinto zokuphilisa i-safari ithetha ngaye ngokungalunganga. Kodwa eqinisweni bahlala kwi-calendula okanye izipikili zokwelapha - ummangaliso. Eyona mpumelelo "inkohliso"!
Impilo nobuhle . Izifundo eziphambili ze-calendula okanye i-marigold yezokwelapha ziye zathotyelwa njengeliyeza elichasayo. Imibala yeentyantyambo zayo yayiphathwa kwaye iphathwa nge stomatitis kunye ne-tonsillitis, pharyngitis kunye ne-laryngitis, i-tonsillitis kunye ne-periodontitis. Ukuze unyango lwezilonda zesikhumba, ioli ende ende isetyenziswa ixesha elide. Ukwenza oko, ibhotela ibhokhwe okanye amanqam Emva koko iintyatyambo zisuswe. Namhlanje, ama-pharmacy athengisa ukuphilisa amafutha kunye nama-creams asekelwe kwikhalendula. Kwaye utywala obunxilisayo njenge-antiseptic kwiintlobo ezahlukeneyo ze "wads" zisetyenziswe kulo lonke ilizwe.
Akukho mntu uya kuphazamisa . Kodwa cinga i calendula-lo mqondiso we-orange kuphela nje umlungiso ongaphandle! Izikhonkwane ezinemibala kunye neasiksi zineempembelelo ezintle zithonya iigourmets zexesha elidlulileyo kuba i-calendula inentsingiselo ye-choleretic. Ngoko ke, itiye kwiintyatyambo zayo isetyenziswa ngempumelelo kwizifo ze-gallbladder. Kwaye "i-daisy" ebomvu ine-anti-spasm, i-calming effect. Ngako oko, inokusetyenziswa ekunciphiseni nayiphi na intlungu enxulumene neentsholongwane zezitho ezingenanto - kunye ne-intestinal colic kwiintsana, kunye nokukhathazeka ngokutya ngokutya kwabantu abadala. Isenzo se-marigold njenge-antispasmodic sicacisa ukuba kutheni amachiza omntu agxininisa ukucetyiswa kwe-calendula kwimihla ebuhlungu.
Ipayela ioli ngombala omnene ... Inyaniso enomdla: phambi kweentsuku ezinkulu ze-bazaar ootata bethu batyhidi i-calendula ioli. Kwavela kwaye iyamkeleka, kwaye incedo. Kwezinye iindawo i-marigolds isabizwa ngokuba ngumbala weoli. Kodwa enhle ngakumbi "umbala wegolide". Yona nickname enjalo kwi-calendula!
Iindwendwe Zangaphakathi Azingathandi Ukukhanya
Sikhula utamatisi ekhaya
Indlela yokucoca iintyatyambo zangaphakathi
I-St. John's wort kunye nokusetyenziswa kwayo kumachiza omntu
Ulwazi olubanzi malunga ne-physalis, kunye neengcebiso zokukhula nokunyamekela
Ukusetyenziswa kwe-azaleas ekhaya
I-recipe elula yokupheka iklabishi ekwindawo eninzi
I-jellied pie kwi-multivark
Iindlela zokupheka kakhulu, iipesele
Ikhekhelethi ikhekhe ngekhilimu ye-peanut
Ungazi njani ukuba ukuzalwa kwaqala
Iimbangela zentlungu ekunyangeni
Iindle zeLinden zokulahleka kwesisindo
Ukuhlawula ngamabhanki aphumayo ukulahleka kwesisindo
Iinkwenkwezi zakhawuleza ukulila i-Dmitry Hvorostovsky, umfanekiso
Iifatata ezifihliweyo kwi-oven